DIY छत स्पाइडर पेंडेंट प्रकाश निर्माता, कारखाना, थोक - उत्पाद - ड Dong्गगुआन Yisheng इलेक्ट्रिक कं, लिमिटेड
हामीलाई कल गर्नुहोस् +86 13925787551
हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् joeyxiao@mosonlighting.com
एल्युमिनियम भोजन कोठाको झूमर
घर > रेस्टुरेन्ट झूमर > एल्युमिनियम भोजन कोठाको झूमर > DIY छत स्पाइडर पेंडन्ट प्रकाश
एल्युमिनियम शेड झूमर
एडिसन रेट्रो एल्युमिनियम बत्ती होल्डर झूमर
स्पाइडर आकारको एल्युमिनियम बत्ती होल्डर भोजन कक्ष झूमर
संगीत वाद्ययन्त्रको आकारको एकल एल्युमिनियम कभर भोजन कोठाको झूमर
भोजन कोठाको झूमर
DIY छत स्पाइडर पेंडन्ट प्रकाश
डोgu्ग्वान Yisheng इलेक्ट्रिक कं, लिमिटेड उत्पादन र होटल र घर प्रकाश, प्रकाश सामान र विभिन्न शक्ति कर्ड बेच्छ। हाम्रो कम्पनीले प्राप्त गर्‍यो: C सी, वीडीई, रोस, जीएसजी, आइरच, साए, इन्ट्राटेक, बीएसआई, ईटीएल र अन्य प्रमाणपत्रहरू।
डgu्गगुआन Yisheng इलेक्ट्रिक कं, लिमिटेड उत्पादन र बिक्री गर्दछ होटल र घर प्रकाश, प्रकाश सामान र vएरियस पावर कर्डहरू। हाम्रो कम्पनीले प्राप्त गर्‍यो: C सी, वीडीई, रोस, जीएसजी, आइरच, साए, इन्ट्राटेक, बीएसआई, ईटीएल र अन्य प्रमाणपत्रहरू।
१. एल्युमिनियम भोजन कोठाको झूमरको उत्पादन वर्णन
रेट्रो एल्युमिनियम बत्ती होल्डर
लम्बाइ अनुकूलित गर्न सकिन्छ
आईड / उर्जा बचत / एडिसन बल्ब
10CM ~ 30CM छत डिस्क
२.अल्युमिनियम भोजन कोठाको झूमर उत्पादन परिचय:
बत्ती लामा आकार
W10 x H20CM
W18 x H19CM
W15 x H15CM
W15 x H19CM
W16 x H21CM
W19 x H15CM
W20 x H20CM
W19 x H23CM
W16 x H28CM
3.अनुप्रयोग परिदृश्य र विवरणहरू
१) .अनुप्रयोग परिदृश्य
२)। विस्तृत विवरण: संयोजन विवरण-
R. रिल शट शो
P. प्याकेजिंग र एल्युमिनियम रेस्टुरेन्ट झूमरको डेलिभरी
प्याकिंग प्रकार: एकल सुरक्षा प्याकिंग। बाहिरी बक्स आकार: उत्पादको वास्तविक आकार अनुसार अनुकूलित।
वितरण समय: सामान्य उत्पादन चक्र days० दिन हो, र निर्दिष्ट मात्रा अर्डर मात्रामा निर्भर गर्दछ।
~ 45 ~ days० दिनहरू
Days० दिन देखि days० दिन सम्म
Q1: यो अनुकूलन समर्थन गर्दछ?
A1: हामी OEM समर्थन गर्दछौंर ODM।
Q2: तपाईं एक कारखाना वा ट्रेडिंग कम्पनी हो?
A2: हामी एक ब्रान्ड कम्पनी हो र प्रकाश उत्पादनहरु मा विशेषज्ञता, र हाम्रो आफ्नै कारखाना छ।
Q3: कसरी आफ्नो कम्पनी संग एक कस्टम परियोजना शुरू गर्ने?
A3: कृपया हामीलाई तपाईंको डिजाइन रेखाचित्र वा मूल नमूनाहरू पठाउनुहोस् ताकि हामी उद्धरण प्रदान गर्न सक्दछौं। यदि सबै विवरणहरू पुष्टि भए, हामी नमूनाहरू बनाउने व्यवस्था गर्नेछौं।
Q4: तपाइँको MOQ के हो?
A4: न्यूनतम आदेश मात्रा उत्पादन डिजाइन र उत्पादन प्रक्रियामा निर्भर गर्दछ।
Q5: के तपाईं निःशुल्क नमूनाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ?
A5: उत्पादन गरिएको उत्पादनहरूका लागि, नमूना नि: शुल्क प्रदान गर्न सकिन्छ, तर तपाईंले शिपिंग लागत तिर्नु पर्छ; उत्पादन नभएको उत्पादनहरूका लागि तपाईंले नमूना शुल्क तिर्नु पर्छ (जस्तै मोल्ड लागत + शिपिंग, आदि), र हामी तपाईंलाई अर्डर गरे पछि हामी यो फर्काउँदछौं।
Q6: सामानहरू कसरी तिर्ने?
A6: हामी T / T स्वीकार्छौं: 30% / 70%।
हट ट्यागहरू: DIY छत स्पाइडर पेंडन्ट प्रकाश निर्माता, कारखाना, थोक
रेट्रो एल्युमिनियम बत्ती होल्डर भोजन कक्ष लटकन बत्ती
संयुक्त एल्युमिनियम कभर भोजन हल
भवन A1, Huifeng औद्योगिक पार्क, Tielukeng, Qishi टाउन, Dongguan शहर
© प्रतिलिपि अधिकार २०२०-२०१२ डgu्गगुआन मोसन टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड।